विदेशबाट फर्केकालाई १० र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख ऋण दिइने…
काठमाडौँ — सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज दरमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने उल्लेख गरे ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि
सरकारले ३ अर्व १० करोड रुपैया बजेट छुट्टाएको छ ।
सार्वजनिक रोजगारी प्रत्याभुतिको लागि छुट्टै विद्येयक संसदमा पेश गर्ने भएको छ । सरकारले रोजगार सुचना केन्द्र स्थापना, समान कामको लागि सामान ज्याला, आन्तरीक श्रम निरिक्षण गर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको सीप परीक्षण गरि उद्यम गर्नको लागि १० लाखसम्म ऋण दिने योजना ल्याएको छ । सीप सिकेका कामदारलाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान दिने र ७ वटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृतिको लागि कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको कार्यमा संलग्नलाई आन्तरिक रोजगार सिर्जनमा प्रयोग गर्ने भएको छ ।
source kantipur news
विभेदकारी ज्याला बृद्दी गर्ने कोरियाको तयारि….कोरियाको संसदले मजदुर कानुनको परिबर्तन तथा मासिक बोनस बृद्दी सम्बन्धि कानुन पास गर्ने तयारीमा छ l गत हप्ता कानुनबिध तथा संसदीय मजदुर समिति बीच भएको सहमति अनुसार महिनामारी बोनस ,यातायात तथा आवास खर्च बृद्दी गर्ने तयारि गरेको भएता पनि केहि बिश्लेसक हरु यसमा सहमत छैनन् l आउदो बर्षको लागि महिनामारी बोनसमा २५ प्रतिशत , आवास तथा यातायात खर्चमा न्युनतम तलबको ७ प्रतिशत बृद्दी गर्ने संसदीय मजदुर समितिले तयारि गरेको छ l यद्वपि न्युनतम ज्याला बृद्दीको लागि भने कुनै तयारि गरेको छैन l न्युनतम ज्याला बृद्दी नगरी बोनस तथा अन्य शिर्षकमा ज्याला बृद्दी गर्दा समानता हुन् नसक्ने भन्दै मजदुर संगठन भने यसको बिरोधमा छ l उक्त नीतिले धेरै ज्याला लिने कामदारको मासिक तलबमा थप बृद्दी हुने छ भने थोरै ज्याला हुने मजदुरको कम बृद्दी हुने छ l त्यसो त कतिपय कम्पनीमा मासिक बोनस दिने नियम नै छैन l उक्त नीतिले बोनस नदिने कम्पनीमा कार्यरत मजदुरको कुनैपनि ज्याला बृद्दी नहुने मजदुर संगठनको ठहर छ l उक्त नीतिले मजदुर मजदुर बीच विभेद निम्त्याउने भन्दै फेडेरेसन अफ कोरिया ट्रेड युनियन लगायत अन्य मजदुर संगठन हरु यसको बिरोधमा निरन्तर संघर्षमा छन् l सन् २०११ देखि न्युनतम ज्यालामा ८.१ प्रतिशत भन्दा बृद्दी नगरेको सरकारले गत बर्ष १६.,४ प्रतिशत ज्याला बृद्दी गरेको थियो l राष्ट्रपति मुन ले इन को सन् २०२० सम्म प्रति घण्टा १०हजार वन पुर्याउने चुनाबी घोषणा अनुसार २०१९ को लागि १६ प्रतिशत तथा सन् २०२० मा पनि १६ प्रतिशत न्युनतम ज्याला बृद्दी गर्नु पर्ने हुन्छ l
read more . दक्षिण कोरियासँग श्रम समझदारी नवीकरण
१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरियासँग भएको श्रम समझदारी नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिण कोरियासँग नेपालले हरेक दुई-दुई वर्ष श्रम नवीकरण गर्दै आएको छ ।
यसपटकको श्रम समझदारी सकिन लागेकाले आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको
गणतन्त्र कोरिया नेपालको आकर्षक श्रम गन्तव्य हो । ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरेर हरेक वर्ष नेपालीहरु काम गर्न कोरिया जाने गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले श्रम नियमावली २०७५ स्वीकृत पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए ।
यसैगरी चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ६ को चार किलो भन्ने स्थानमा गत साउन ८ गते गएको पहिरो हटाउने क्रममा ज्यान गुमाएका ४ जना प्रहरीका परिवारलाई १० लाखको दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।
शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र संघीय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक सहमति दिने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहयोग गर्ने सबै सांसदहरुलाई धन्यवाद दिने निर्णय पनि भएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताए ।
२०७५ जेठ १४ गते ९:२७ मा प्रकाशित
किन कोरियामा नेपालीले नै नेपालीलाई पिडा दिन्छन? पैसामा हराएको मन ।
विराटनगरका एक क्षेत्री थरका युवालाई नेपालगञ्जका सिंह थरका व्यक्तिले कामको विषयमा गरेको दुव्र्यवहारको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भरिभराउ भयो । आफू पहिला नै कोरिया छिरेको ध्वाँस र कोरियाको एक बंगुर फार्ममा आफू शानदार रुपमा काम गरेको रबैयाका साथ अत्यन्तै अश्लील र तुच्छ शब्दद्वारा गाली गरेको उनको फोन अडियो निकै आलोचित बन्यो । त्यो फोन अडियो कोरियाबाट चलाइएका नेपाली युट्यूब च्यानल, अनलाइन तथा फेसबुकमा निकै भाइरल बन्दै गयो । मे महिनाको पहिलो साता तिर सार्वजनिक भएको त्यस अडियोमा एक वर्ष अगाडि कोरिया आएका ती क्षेत्री थरका युवालाई कामको कडा निर्देशनसँगै गालीका वर्षाहरु छाडा रुपमा प्रयोग गरिएको थियो ।
लेखक तथा पत्रकार
Previous चिया बेचेरै मासिक ३ लाख
Next सहकारीकाे करडौं रूपैयाँ अपचलन गर्ने मुख्य संचालक पोखराबाट पक्राउ